Julie's Cheese Sandwich Cookies 168g (3 Pcs) ~ ICT.com.mm
HomeJulie's Cheese Sandwich Cookies 168g (3 Pcs)
Julie's Cheese Sandwich Cookies 168g (3 Pcs)
Brand: Julie’s Item: Cheese Sandwich Cookies Contains cereals containing gluten, milk derivatives and soya derivatives. Processed inafacility that also processes peanut, sesame, tree nuts and nut products. Net Weight: 168g... [Learn more]
Item: Cheese Sandwich Cookies
မှတ်ချက်။ ။ Julie’s Cheese Sandwich Cookies 168g (၃) ထုပ် ပါ၀င်သည်။
လူကြီးလူငယ်မရွေး အမြဲလိုလို နှစ်ခြိုက်ကြတဲ့ Julie’s အမှတ်တံဆိပ် Cheese Sandwich Cookies က အငန်ဓာတ်ခပ်ပါးပါးနဲ့ ရွှေအိုရောင်သမ်းနေတဲ့ အဝိုင်းပုံ Cracker မုန့်ချပ်ကြားထဲမှာ ချိုမြပြီး အငန်ဓာတ်အနည်းငယ်ပါတဲ့ချိစ်ကို ညှပ်ထည့်ပေးထားတဲ့ Cheese Sandwich ကွတ်ကီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ အာဟာရနဲ့ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပဲအခြေခံပစ္စည်းတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Julie’s Cheese Sandwich Cookies 168g အထုပ် စုစုပေါင်း (၃) ထုပ် ပါ၀င်ပါတယ်။